China Fan fanarenana fonosana mpanamboatra sy mpamatsy | Chapman
✭ Ny fonosana lamosina plastika an'ity mpankafy ity dia vita amin'ny fitaovana plastika PA66 + 30GF. Ity fitaovana plastika ity dia mahatohitra ny harafesina sy ny fahanterana, ary mety ampiasaina amin'ny toetr'andro samihafa.
✭ Ity andiana lasitra plastika ity dia aondrana any amin'ireo firenena eropeana, ary ny fiainana ny bobongolo dia mila mahatratra 500000. Ny akora vita amin'ny bobongolo dia mampiasa fitaovana mafy orina 1.2343, ary ny fanodinana ny alim-by dia mampiasa varahina grafita. Ny firafitry ny bobongolo dia vita amin'ny bobongolo misy takelaka telo, ary 32 segondra ny tsingerin'ny tsindrona. Ireo andiam-paritra ireo dia miompana amin'ny vidin'ny mpanjifa amin'ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana, mba hahazoana tombony azo amin'ny famokarana betsaka araka izay azo atao amin'ny mpanjifa.
Bobongolo No. CPM-150226
Famaranana ambonin'ity VDI-33
Fitaovana plastika PA66 + 30GF
Ampahany lanja 30.5g
Part size 190 * 190 * 63 mm
Haben'ny bobongolo 400 * 400 * 411mm
Anaran'ny ampahany Saron-damosin'ny lamosina
Rongony bobongolo 1 * 1
mpihazakazaka Lasitra lovia telo ho an'ny vavahady teboka
Malagasy Adikao ny Meusburger
Bobongolo fitaovana 1.2343ESU / 1,2312
Fe-potoana 35 andro
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 32 ny
Ny mpankafy indostrialy koa dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny simika, fitsaboana, fiara, fambolena, fitrandrahana, fikarakarana sakafo, ary indostrian'ny fananganana, izay afaka mampiasa mpankafy indostrialy ho an'ny fizotrany avy. Ampiasaina amin'ny fampiharana mangatsiaka sy fanamainana maro izy ireo.
Ireo mpitsoka afovoany dia ampiasaina matetika amin'ny rindranasa toy ny fifehezana vovoka, famatsian-drivotra mandoro, amin'ny fampangatsiahana, rafitra fanamainana, ho an'ny aerator fandriana tsiranoka miaraka amin'ny rafitra mpampita rivotra sns sns. fanamafisana ny entona, ary koa ny entona manetsika isan-karazany amin'ny indostrian'ny petrochemical.
Noho izany, ny compresseur, ny mpankafy ary ny mpitsoka dia manarona ny Kaominina, Manamboatra, solika sy gazy, harena ankibon'ny tany, indostrian'ny fambolena ho an'ny fampiharana isan-karazany, tsotra na sarotra amin'ny natiora.
Ny fandinihana amin'ny antsipiriany ny endrika sy ny masontsivana rehetra dia takiana mba hividianana compressor, mpankafy na tsofina mety eny an-tsena mba hahafahany mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fizotranao ary hiantohana ny fahamendrehana sy ny faharetana miaraka amin'izay.
Previous: Mpampitohy 34 sy 4 pin
Manaraka: Ireo singa milina kafe